मेरो आमालाई ब’चाइदिनुहोस् उहाँ बिना हामी कस्को सा’हाराले बाँच्ने ? के आइलाग्यो य’स्तो ! – Gazabkonews
मेरो आमालाई ब’चाइदिनुहोस् उहाँ बिना हामी कस्को सा’हाराले बाँच्ने ? के आइलाग्यो य’स्तो !
काठमाण्डौ । भर्खरै सुदुर पश्चिमका विजेन्द्र रावतसंग विबाह बन्धनमा बाँधिएकी नायिका श्वेता खड्का आमा बन्दै छिन् ।
यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो साँचो हो । उनी रियल लाईफमा नभई रिलमा आमा बन्ने भएकी हुन् । चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएकी छन् ।
उनी अभिनीत चलचित्र ‘कान्छी’ दुई वर्षअघि प्रदर्शनमा आएको थियो । अहिले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिँदै आएकी उनी यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी हुन् ।
‘हुर्रे’, ‘मेरी मामु’ र ‘रज्जा रानी’ निर्देशन गरेका यमको निर्देशनमा बन्ने नयाँ चलचित्रमा श्वेताले काम गर्न लागेकी हुन् । चलचित्रमा उनी आमाको भूमिकामा देखिने छिन् ।
चलचित्रले आमा र छोरीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा भन्ने छ । कोरोना महामारी र लकडाउनको अवस्था सहज हुनेबित्तिकै चलचित्रको छायांकन सुरु हुने बताइएको छ । चलचित्रमा छोरीको भूमिकामा सेड्रिना शर्मालाई लिने प्रयास भइरहेको छ ।
डेब्यु चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट लभर गर्लको भूमिकामा देखिँदै आएकी श्वेतालाई पहिलो पटक दर्शकले भिन्न भूमिकामा देख्न पाउनेछन् । चलचित्रमा उनको अहम् भूमिका रहेको छ।
न्यूज २४ ले बिदाईकै दिन दियो रवि लामिछानेलाई अहिलेसम्मकै ठूलो धो.का
५ सेप्टेम्बर सन् १९७४ मा भक्तपुरको बागेश्वरीमा जन्मिएका रवि लामिछाने किशोरावस्थामै कार्यक्रम चलाउँथे । दाजु हरिशरण लामिछाने रेडियो नेपालका समाचारवाचक हुनुले उनमा आवाजको दुनियाँमा काम गर्ने प्रेरणा मिलेको थियो । तर, उनी देशभित्र लामो समय बसेनन् ।
मिडियामा काम गरिसकेका उनी मिडियामै काम गर्नेगरी स्वदेश फर्किए । गिनिज बुकमा नाम लेखाउने देखि जनताको समस्या उठाएर चर्चामा आए । चर्चासँग पटक पटक विवादमा आएका उनी हिरासतसम्म पुगेर धरौटीमा रिहा भए । उनको आरोह र अवरोहले भरिएको जीवन यस्तो छः
त्यस्तै जाँदाजाँदै उनले सञ्चारमाध्यममा बोल्दै आफू देशको लागी प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएको बताएका छन ।साभार
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बा,च्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित)